Ukuphonononga izixhobo zobusela-Geofumadas
Ikhaya/GPS / Izixhobo/Ulwabi lobaphulo lwezixhobo zokuhlola
GPS / IzixhoboTopography
Ngaphantsi kwe-intetho yomdla jikelele
Ukususela kwiinyanga ezimbalwa ezedlule ukuya namhlanje, abaphandi njengecandelo baxhatshazwa ngokuphanga izitishi zethu zonke, amanqanaba kunye ne-GPS.
Ukusuka kum msebenzi wam, kwinkampani ehambisa iimveliso kwi-Topography, inqabile yiveki, ukuba andiyazi nayiphi na ukuphanga kwisibambiso sokwakha, imoto okanye nangomsebenzi ngokwawo.
Ngokuqhelekileyo ezi ntloba ziyenzeka eMadrid nakwimimandla. Uninzi lwabahlobo baxelele ukuba babone abantu ababa izinto zethu kwi-mafia, okuya kubayisa kumazwe aseMpuma naseMzantsi Afrika, kodwa asikwazi ukwenza nantoni na.
Inkampani yam, njengenkampani ehlawula izixhobo ekuhlanganisweni kwethu, esandul 'isayithi yokwakha, uye wabhekana nokubiwa kweGPS kunye neziteshi ezimbini eziphezulu eziphezulu zeLeica brand.
Ifom lobusela, livela maxa wambi isidlo, apho i "amasela 'ukuza ngokungenazintloni ukusebenza ukubamba i" iibhokisi ebomvu okanye emthubi "uhambe ngaphandle emqumbisa naluphi urhano. Andifuni ukucinga ukuba nabancedisi bethu okanye abasebenzi bomsebenzi bayazi malunga nexabiso leefayili okanye ezenziwe ngokukrazula ukuba ukweba kwenzeke.
Kwiveki ephelileyo, naye ndicinga ukuba isiganeko ekwanti, kufutshane A42, ngemela, wayiba loo GPS ukulungisa iqabane unocanda zethu, ebenza kulala phantsi ngomqolo bakhe, ngoko ke kwafuneka ixesha lokubaleka.
Mna, ke, ndisebenza emsebenzini, ndabuhlungu ukubiwa kwefowuni endiyisebenzisayo, ekubeni le ndawo iminyango yendawo edibeneyo kwaye mna kumamitha ayi-20 yokuthetha nomntu ophethe umsebenzi.
Ukusuka isikhundla sam njenge unocanda, iyandixhalabisa ngokucacileyo ngale meko kunye nokuba ufikelela amanqanaba kwaye ukuba umntu kuni okanye umntu wawusazi ukuba ukufaka uxinzelelo abanye phezu amapolisa, abezopolitiko kunye nemikhosi abamajelo eendaba aya kwamkeleka. Ngenxa yam, ndiza kufumana yonke intsebenziswano, ngokucacileyo.
Emva la mazwi onke, Ndikubekela amanye amacebiso (reversionados iqonga post Cartesia) kwaye njengoko oku isonjululwe, abaninzi bethu kuya kufuneka ukuba bayeke ukusebenza, kuba awukwazi ukuthatha ukubiwa device yakho. Ewe, ukuba ikhompyutha yakho inshorensi, inshorensi, kodwa kuthatha iintsuku ezimbalwa ukuqokelela zonke ixabiso zokufunda ndibawisele kwaye kunazo zonke iintsuku ezilahlekileyo ukusombulula yonke imiba ingenalo novelwano. Ukuba ifowuni iya kuqeshiselwa kwindlu yokubonelela, iya kufuna i-franchise, enokuthi i-20%, yexabiso langoku lokuthengwa kwezixhobo.
-Ungahluli kakhulu kwizinga okanye kwisikhululo samashishini, soloko uqaphele. Ukuba ufanele uhambe, wenze ulawulo oluthile, uvavanye ukuba uyayichitha okanye uphinde ubuyele kwindawo yokupaka okanye ujonge umntu owujongayo. Ngokukodwa ukhathalelo olukhethekileyo kwiindawo ezininzi zendlela, njengezitrato kunye neendlela.
-Ukuba izixhobo zithwelwe emotweni, musa ukuphambuka kude kakhulu kuyo. Ngamaxesha okutya kunokwenzeka ukuba imoto ibonwe kwaye ukuba awuthathi izixhobo kunye nawe ukuya kwindawo yokutyela okanye ibha.
-Beka ulungiso lweGPS, apho kukho abantu abasuka kwindawo yokwakha kwaye banyanzelise ukuba bayigcine.
Kwakhona zibekwe nzima ukufikelela iindawo ngokubonakala ihlwempu iindlela sites kunye yezithuthi encinane, okanye iziza abamelwane enqatyisiweyo, ubacele ukuba bakhathalele ukuba ashiywe apho iiyure ezimbalwa (abadli ukubeka iingxaki). Isisombululo esisodwa kukuba uthathe imoto, ufake zonke izixhobo kuyo ngaphandle kwe-antenna kunye ne-GPs, kwaye kunye nefowuni yeselula yenza indlela yokulungiswa kwi-mobile.
-Ukuba kunokwenzeka, kunye ne-GPS, sebenza nezitishi zesalathiso, ke asisayisebenzisi i-gps emiselweyo
- Nawuphina omnye umlinganiso onokucinga ngawo.
Ngenxa yokuba imeko leyo, kubonakala ngathi singabathunywa bomntu obalulekileyo, kodwa yindlela yethu yobomi kwaye ukuba singaswelekanga, kwaye ngakumbi kula maxesha enzima, asiyazi into esishiye kuyo.
Mhlawumbi le imeyile ayihambelani nomsebenzi wakho, kodwa ukuba inxulumene, okanye uyazi umntu owenzayo, nceda, PASALO.
Xa ulahlwa, ukubingelela.
Umqhubi wezakhono zobuGcisa
Umlawuli wezobugcisa kunye noRhwebo
UMthetho woBumbano baseGuatemala, iV4
Bandi tyelela phi?
Ukukhuselwa kobusela bePIN khowudi efini apho izixhobo zale mihla zizisa ukuba zisebenza njani. . Kukhuselekile?…. isebenza njani le nkqubo. .Masinwabe .
Sikhethe ukusebenzisa abafumanayo kuphela njengezixhobo zentsimi eziqhagamshelwe kwiVRSNow eMadrid, sele sidiniwe ziingxaki ezininzi zomshuwalense ...